जनमतको अपमान र कोरोना कहर ! — donnews.com
'मुलुक फेरि अस्थिर राजनीतिको दलदलमा फसेको छ'
दुई तिहाईकोे कम्युनिष्ट सरकार आफ्नै आन्तरिक किचलो र फुटका कारण ढल्न पुग्यो । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको मतको पनि ठुलो अपमान हुने काम कम्युनिष्ट सरकारले गर्यो । तर यसमा न कामचलाऊ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई चिन्ता छ, न त टुक्रिएर गएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ।
देश कोरानो संक्रमणको महामारीमा रुमल्लिएको छ । जनताहरु आफन्त गुमाएर कोही शोकमा छन्, कोही त्रासमा छन् त कोही जीवन बचाउने आशमा घरमैं सीमित छन् । सर्वसाधारण जनताको जीविकोपार्जनमा नै समस्या खडा भएको छ । फेरि रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थिति खडा हुँदैछ । यो अवस्थामा कुर्चीमा पात्र फेरिनु र दोहोरिनुले खासै जनतालाई चासो नहुनु स्वभाविकै पनि हो ।
निषेधाज्ञा जारी गरेर कोरोनाको महामारीबाट पूर्ण समस्याको समाधान हुने भने होइन । यो संक्रमणको वृद्धि दरलाई रोक्नका लागि सहज बनाउने उपाय मात्र हो । यतिबेला कोरोना संक्रमणले गर्दा मृत्युदर दिनप्रतिदिन निकै बढिरहेको छ । अस्पतालहरुले विरामीको चाप थेग्न सकिरहेका छैनन् । आज बल्ल धेरैले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुलाई सम्झिरहेका छन् । त्यतिबेला डाक्टर गोविन्द केसीलाई पागल भन्नेहरुको स्वार्थ के रहेछ र वास्तविकता के हो ? भन्ने बुझ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
समयमा नै हामीले सरकारी अस्पतालहरुलाई मजबुत बनाउन सकेको भए आज केही राहत अवश्य मिल्ने थियो भन्ने प्रष्ट देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालहरुले लिने चर्को शुल्क र जीवनमरणको अवस्थाले जनता आकुल व्याकुल भएका छन् । बल्ल मानिसहरुले बुझ्दैछन्, किन डाक्टर केसीले निजी अस्पताललाई भन्दा सरकारी अस्पताललाई त्यो पनि विभिन्न दुर्गम ठाउँमा खोल्नका लागि अनसनमा बसिरहे भनेर ।
यता, जनताहरु कोरोनाको कहर झेल्दैछन् । उता कम्युनिष्ट सरकार आफैले निम्त्याएको महामारीमा छटपटिएको छ । दुई तिहाईको सरकार काम चलाऊ सरकारमा परिणत भएको छ । यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबर स्ट्याम’को छवि बनाएकी राष्ट्रपतिको भूमिका पनि मूल्यांकन गर्न लायकको रहेन । उनी दलको पनि एउटा गुटको पक्षमा सधैं आँखा चिम्लेर उभिई रहिन् ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा अन्य विपक्षी दलहरुले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति पनि देखिदैंन । पुनः ठुलो दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था देखिन्छ । यदि यस्तो भयो र यो सरकारले पनि फेरि विश्वासको मत पाउन सकेन भने मुलुक चुनावतिर जान बाहेक अर्को विकल्प देखिदैंन । ओली चुनाव नै चाहन्छन् । तर विपक्षी दलहरुले भने नयाँ सरकार बनाउँछौं भनिरहेका छन् ।
आफ्नै पार्टीबाट विश्वासको मत पाउन नसकेका ओलीको अलोकप्रियता र अवस्था यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ओली म जति बोल्छु, जनताले सबै पत्याउँछन् भन्ने भ्रममा छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव लगायतका अन्य दलका नेताहरु कोही पनि ओली भन्दा कम छैनन् । भ्रष्टाचारमा सबैका आ–आफ्नै आँकडा र सेटिङ छन् ।
अन्तमा, जबसम्म राजनीति निष्ठा, इमान्दारिता र सेवाको भावनाले अघि बढ्दैन । तबसम्म मुलुकको अवस्था झन्–झन् विकराल बन्दै जानेछ । अब विदेशी शक्तिहरुको घुसपैठ र खेल सजिलो भएको छ । देश फेरि अस्थिरताको भूमरीमा फसेको छ । केन्द्रको असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि देखा परिसकेको छ । जनता शोकमा छन्, देशका शासकहरुको सत्ताको खेलमा व्यस्त छन् । इतिहासमा दुई तिहाईको मजबुत सरकार बनाएको कम्युनिष्टहरु यतिबेला आन्तरिक किचलोमा फुट अनि पदच्यूतको अवस्थामा पुगेका छन् । ढोङ्गी कम्युनिष्टहरुको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो भएको छ । मुलुक फेरि अस्थिर राजनीतिको दलदलमा फसेको छ ।